Padaethar - Page 262 of 265 -
May 1, 2020 by Padaethar
တိုကျိုမြို့မှာ တရားဟောနေတဲ့ ဦးပဇင်း ဦးကိတ္တိသာရ(ဦးကျော်ဟိန်း)ပြောင်းလဲသွားပုံ-မနေ့ညက ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မှာ တရားဟောနေတဲ့ ဦးပဇင်းဦးကိတ္တိသာရ (ဦးကျော်ဟိန်း)ရဲ့ တရားကိုfbပေါ်ကနေliveလွှင့်နေတာကိုဖွင့်ကြည့်ရင်း နာယူနေမိတယ်။ ရဟန်းပြုကာစတုန်းက အခြေအနေတွေနဲ့လုံးဝမတူတော့ဘဲပြောင်းလဲသွားတာကို ဦပဉ္ဇင်းဟောချက်တွေက သက်သေပြနေပါတယ်။ရဟန်းဝါ (၁၀)ဝါအတွင်းမှာ အကျင့်ဘက်ကို ဘယ်လောက်တန်ဖိုးထား ကျင့်ကြံခဲ့သလဲဆိုတာ ရွေးချယ်လိုက်တဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ အသံနေအသံထားကတဆင့်အဖြေထုတ်နိုင်ပါတယ်။ တရားနာယူရင်း ကြည်နူးကျေနပ် အားကျစိတ်နဲ့အတူ၁၉၉၆ခုနှစ်တုန်းက အတူလက်တွဲရိုက်ခဲဖူးကြတဲ့ “ဝေလည်းမွှေး ကြွေလည်းမွှေး” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ရိုက်ကွင်း တွေဆီစိတ်ရောက်သွားမိပြန်ပါသေးတယ်။ ရိုက်ကွင်းမှာငြင်းရခုန်ရ အပြန်အလှန်နားလည်မှုယူခဲ့ကြတာတွေဟာ ဦးကျော်ဟိန်းအတွက် အဲဒီနှစ် ဇာတ်ပို့အကယ်ဒမီ ရစေခဲ့လို့ အကယ်ဒမီပွဲမှာ ကြည်နူးဝမ်းမြောက်နေတဲ့ ဦးကျော်ဟိန်းရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုလည်း ပြန်မြင်ယောင်မိပါတယ်။ အဲဒီဇာတ်ကားရိုက်ခဲ့ပြီးနှစ်အတော်ကြာတော့ ဦးကျော်ဟိန်းကသာသနာ့ဘောင်ထဲရောက် တင့်တင့်ထွန်းက သီလရှင်ဘဝကိုအပြီးတိုင်ကူးပြောင်း ဒွေး (သားကြီး)က အရွယ်ကောင်းတုန်းအောင်မြင်တုန်းမှာ ဘဝတစ်ပါးကူးပြောင်းကိုယ်က ရုပ်ရှင်တွေသီချင်းတွေကိုကျောခိုင်းပြီးဓမ္မရိပ်ကိုခိုလှုံကူးပြောင်းနဲ့ ပြောင်းလဲလိုက်ကြတာ အမျိုးစုံပါပဲ။ ဟိုတုန်းက ကိုယ်ရေးခဲ့တဲ့ဇာတ်ညွှန်းကို သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဦးကျော်ဟိန်းဟာ အခုတော့ ဦးကိတ္တိသာရဘဝနဲ့ကိုယ့်ကို … Read more
မွေးခန်းထဲမှာ သားဖွားမယ့်မိန်းကလေးကို မှုတ်ပေးရတဲ့ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်
မွေးခန်းထဲမှာ သားဖွားမယ့်မိန်းကလေးကို မှုတ်ပေးရတဲ့ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ် ကျနော်က Ortho ပေမယ့် ဆာဝန် ဘဝ တလျှောက် OG Ward ကို အလွမ်းဆုံး ။ OG တောင်မှ မွေးခန်း ကို အလွမ်းဆုံး..၊ ဘယ်လောက် လှတဲ့ မိန်းမ ဖြစ်စေ ဘယ်လောက် ရုပ်ဆိုးတဲ့ မိန်းမဖြစ်စေ မွေးခန်းထဲ ရောက်ရင် အတူတူပဲ လှလှ မလှလှ.. ရုပ်ဆိုးဆိုး မဆိုးဆိုး ချီးမထွက်ရင်… တော်ပြီ..။ ကိုယ်ဒွေ အတွက်တော့ ချီးမထွက်တဲ့ မိန်းမ က ချစ်ဖို့ကောင်းတာဗျ။ ခလေး မထွက်ခင်.. ချီး အရင် ထွက်တတ်တာကိုး မိန်းမ အများစု (တချို့မပါ )တူညီတဲ့ အချက်က ခလေးကလည်း မထွက်သေး … Read more
ခင်ပွန်းဖြစ်သူမှ မိန်းမဖြစ်သူအား လောင်မီးဖြင့်ပက်မှုဖြစ်ပွား…
ခင်ပွန်းဖြစ်သူမှမိန်းမဖြစ်သူအားလောင်မီးဖြင့်ပက်မှုဖြစ်ပွား လောင်မီးပတ်ခံရလို့ မော်လမြိုင်ဆေးရုံကြီးသို့ (အရေးပေါ်) ကူညီပို့ဆောင်…. 01.05.2020(10း48)amအချိန် သံဖြူဇရပ်ဆေးရုံကြီးမှ လောင်မီးအပတ်ခံရ အမျိုးသမီးအား မော်လမြိုင်ဆေးရုံကြီးသို့ ကူညီပို့ဆောင်ပေးပါရန် အကူအညီတောင်းခံလာပါသဖြင့်…. ပိုင်ရှင်မဲ့လူမှုကူညီရေးအသင်း မှ ယာဉ်မောင်း…. ကိုထွန်း ၊ ယာဉ်ကူ….ကိုမြင့်နိုင်တို့မှ လုပ်အားကုသိုလ်ယူ၍ မော်လမြိုင်ဆေးရုံကြီးသို့ ကူညီပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြပါသည်။ ကြားသိရတဲ့သတင်းအရ ခင်ပွန်းဖြစ်သူမှ ပတ်လိုက်တာဟု ကြားသိရပါသည်။(01.04.2020) Crd…ပိုင်ရှင်မဲ့လူမှုကူညီရေးအသင်း unicode ခငျပှနျးဖွဈသူမှမိနျးမဖွဈသူအားလောငျမီးဖွငျ့ပကျမှုဖွဈပှား လောငျမီးပတျခံရလို့ မျောလမွိုငျဆေးရုံကွီးသို့ (အရေးပျေါ) ကူညီပို့ဆောငျ…. 01.05.2020(10း48)amအခြိနျ သံဖွူဇရပျဆေးရုံကွီးမှ လောငျမီးအပတျခံရ အမြိုးသမီးအား မျောလမွိုငျဆေးရုံကွီးသို့ ကူညီပို့ဆောငျပေးပါရနျ အကူအညီတောငျးခံလာပါသဖွငျ့…. ပိုငျရှငျမဲ့လူမှုကူညီရေးအသငျး မှ ယာဉျမောငျး…. ကိုထှနျး ၊ ယာဉျကူ….ကိုမွငျ့နိုငျတို့မှ လုပျအားကုသိုလျယူ၍ မျောလမွိုငျဆေးရုံကွီးသို့ ကူညီပို့ဆောငျပေးခဲ့ကွပါသညျ။ ကွားသိရတဲ့သတငျးအရ ခငျပှနျးဖွဈသူမှ ပတျလိုကျတာဟု ကွားသိရပါသညျ။(01.04.2020) … Read more
မရောင်းရတဲ့ ထီလက်မှတ်များ အလွန်များပြာနေသည့်အတွက် ယနေ့ထီဖွင့်ပွဲ မပြီးပါ…
မရောင်းရတဲ့ ထီလက်မှတ်များ အလွန်များနေပါသဖြင့် ယနေ့ထီဖွင့်ပွဲ မပြီးပါ မရောင်းရတဲ့ ထီလက်မှတ်များ အလွန်များပြာနေသည့်အတွက် ယနေ့မေလ (၁)ရက်နေ့ ထီဖွင့်ပွဲ မပြီးပါ… ရန်ကုန်၊ မေလ (၁)ရက် ကျပ်တစ်ထောင်တန် (၁၅) ကြိမ်မြောက်ထီဖွင့်ပွဲကို ဒီနေ့မေလ (၁) ရက်မှာ အပြီးဖွင့်နိုင်မှာမဟုတ်ပဲ မေလ (၂) ရက်နေ့မှသာ ဆုမဲတွေကို ဆက်ရွေးချယ်နိုင်တော့မယ်လို့ အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲက သိရပါတယ်။ ဒီနေ့မှာ ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ ထီပေါက်စဉ်အများစုဟာ မရောင်းချရတဲ့ ထီလက်မှတ်တွေဖြစ်နေတာကြောင့် ထီဖွင့်ပွဲမပြီးသဖြင့် ထီပေါက်စဉ် ထွက်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ သိရပါတယ်။ “ထီတွေအများကြီးကျန်နေလို့ အကြာကြီးဖွင့်နေရတယ်။ လောလောဆယ် တစ်ရက်နဲ့တော့မပြီးနိုင်ဘူး။ပေါက်ဂဏန်းက မရောင်းရတဲ့ထီတွေအများကြီးပါနေလို့ တစ်ရက်ထဲနဲ့ဖွင့်လို့မရနိုင်ဘူး။ အနည်းဆုံးတော့ (၂) ရက်လောက်ဖွင့်ရမယ်။” လို့အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲက လက်ထောက်ညွန်ကြားရေးမှူး ဦးကျော်သန့်လွင်က ပြောပါတယ်။ Unicode မရောငျးရတဲ့ ထီလကျမှတျမြား အလှနျမြားနပေါသဖွငျ့ … Read more
ဒီလ ထီမထိုးလိုက်ရသူများ ကြေကွဲပီ….
ဒီလ ထီမထိုးလိုက်ရသူများ ကြေကွဲပီ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေး နှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန / အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲ ကြေညာချက် (ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ဧပြီ လ ၂၉ ရက်) ၁။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလ (၁)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် (၁၅) ကြိမ်မြောက် ၁၀၀၀ ကျပ်တန် အောင်ဘာလေသိန်းဆုဖွင့်ပွဲအတွက် “က”အက္ခရာမှ“ကင” ထိ စုစုပေါင်းအက္ခရာ(၃၈) လုံး၊ထီစာအုပ်(၃၁၀၉၀၈၄) အုပ်အား ရောင်းချခဲ့ပါသည်။ ၂။ ထိုသို့ရောင်းချပေးခဲ့ရာတွင် ထီစာအုပ် (၁၂၉၇၃၉၉) အုပ်ရောင်းချခဲ့ရပြီး ထီစာအုပ် (၁၈၁၁၆၈၅) အုပ်မှာ ရောင်းမကုန်ထီအဖြစ်ကျန်ရှိခဲ့ပါသည်။အဆိုပါ ရောင်းမကုန်ထီလက်မှတ်များအား ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ Website: www.ird.gov.mm နှင့် အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲ၏ ကြော်ငြာသင်ပုန်းတွင် ကြေညာထားပါသည်။ ၃။ ထီစာအုပ် ရောင်းရငွေမှာ ကျပ်သန်း … Read more
ဗိုက်ပေါ်ဖုန်းတင်ကာ ဖုန်းအားသွင်းလျှက် အိပ်ပျော်သွားရာမှ ဓါတ်လိုက်သေဆုံးနေ…
ဗိုက်ပေါ်ဖုန်းတင်ကာ ဖုန်းအားသွင်းလျှက်အိပ်ပျော်သွားရာမှဓါတ်လိုက်သေဆုံးနေမှုအား ၂ ရက်အကြာမှသိရ ထိုင်းနိုင်ငံ နန့်ခရိုင် ဖဲလ်မြို့နာ် လောင်ဖောင်းကျေးရွာအုပ်စုရှိ နှစ်ထပိအဆောင်အပေါ်ထပ်တွင် အသက် ၃၂ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးသည် ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့ ၁၄:၀၀ ချိန်တွင် ဖုန်းအားသွင်းလျှက် ဓါတ်လိုက်သေဆုံးနေသည်မှာ ၂ ရက်ခန့်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း…. ပုံပါအတိုင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရ သည်ဟု ဒုတိယရဲမှူး ဆမ်းရမ်း ဝုန်းချိုင်းယားမှအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရ ။ Photo Crd #Thairat #SiThuMaung หนุ่มโสดวัย 32 ปี ลูกจ้างส่งของที่ จ.น่าน หายตัวไม่ไปทำงาน2วัน ถูกพบเป็นศพ สภาพกำมือถือเสียบสายชาร์จ ที่มีมือรอยไหม้ คาดนอนเล่นเกมออนไลน์ แล้วสายรั่วไฟช็อตตาย เวลา 14.00 น. วันที่ 30 เมษายน พ.ต.ท.สำราญ วงศ์ไชยา พงส.สภ.เมืองน่าน … Read more
လမျးသှားရငျး ကလေးငယျတဈဦးကို ဖတျြခနဲ တှလေို့ကျမိတယျ စိတျထဲ မသင်ျကာလို့ကားပျေါကဆငျးပွီး ကလေးရဲ့အခွအေနကေို ကွညျ့တဲ့အခါ
လမ်းသွားရင်း ကလေးငယ်တစ်ဦးကို ဖျတ်ခနဲ တွေ့လိုက်မိတယ် စိတ်ထဲ မသင်္ကာလို့ကားပေါ်ကဆင်းပြီး ကလေးရဲ့အခြေအနေကို ကြည့်တဲ့အခါ လမ်းသွားရင်း ကလေးငယ်တဦးကို ဖျတ်ခနဲ တွေ့လိုက်မိတယ် – စိတ်ထဲ မသကာင်္လို့ကားပေါ်က ဆင်းပြီး ကလေးရဲ့ အခြေအနေကို ကြည့်တဲ့အခါ ကလေးက မောနေတယ် – အသက်ကို မနည်းရှူနေရတယ် ကျောနဲ့ရင်ကို စမ်းကြည့်တဲ့အခါ ချွဲသံတွေက ဟောဟောထလို့ မင်း ကလေးကို ဆေးခန်းမပြဘူးလားလို့ မေးတဲ့အခါ ငို တယ် – ယောက်ျားက အချုပ်ကျနေတယ် – ဒီနေ့ရုံးထုတ် – ကလေးမိခင် နေတာက ဘူတာရုံ တဝိုက် အလုပ်က တောင်းရမ်းအလှူခံ အေး အဲ့ဒါကြောင့် တွေ့ဖူးတယ်လို့ထင်နေတာ လမ်းပေါ်မှာ အဲ့လို ကလေးနဲ့တောင်းနေရင် လိုက်ဖမ်းနေတာ အစ်ကို … Read more
ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေ… (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလ (၁) ရက်နေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက်) “ယနေ့မြန်မာစံတော်ချိန် (၀၉:၃၀) နာရီအချိန် တိုင်းထွာချက်များအရ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနှင့် ယင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသော ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့တောင်ပိုင်းတို့တွင် နောက် ၁၂ နာရီအတွင်း လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး၊ ပိုမိုအားကောင်းလာကာ (နောက် ၆၀ နာရီအတွင်း) (၃.၅.၂၀၂၀) ရက်ခန့်တွင် မုန်တိုင်းငယ်အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ မုန်တိုင်းငယ်သည် ကနဦးတွင် မြောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ရွေ့လျားပြီး၊ နောက်ပိုင်းတွင် မြောက်-အရှေ့ မြောက်ဘက်သို့ကွေ့ကာ မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းသို့ ဦးတည် ရွေ့လျားမည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။” မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန unicode ကပ်ပလီပငျလယျပွငျနှငျ့ ဘင်ျဂလားပငျလယျအျောအခွအေနေ… (၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ၊ မလေ (၁) ရကျနေ့ မွနျမာစံတျောခြိနျ … Read more
ဘုရားလာဖူးရင်း ထီထိုးရာမှ သိန်းပေါင်းတစ်သောင်းခွဲဆွတ်ခူးရရှိသွားသော ကံထူရှင်ထွက်ပေါ်လာပါပြီ…
နေပြည်တော်လက်လုပ်တောင်တွင် ဘုရားလာဖူးရင်း ထီထိုးရာ ရန်ကုန်မှဘုရားဖူးမိသားစုသိန်းပေါင်းတစ်သောင်းခွဲဆွတ်ခူး နေပြည်တော်၊ လက်လုပ်တောင်သာဝက၊ ဗောဓိရိပ်ငြိမ်တောရဆရာတော်၏တပည့်သာဝက ရန်ကုန်မြို့နေ ဦးအောင်နေလ+ ဒေါ်ဝေဝေလင်း မှ လက်လုပ်တောင်ဘုရားဖူးခဲ့ပြီးကံစမ်းခဲ့သော ထီလက်မှတ်မှာ … (၁၅)ကြိမ်မြောက် သိန်း( ၁၅၀၀၀)ကံထူးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နေပြည်တော်လက်လုပ်တောင် ရွှေနန်းသွင်းစေတီတော်မြတ်ကြီးဟာဗောဓိရိပ်ငြိမ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့၏ မေတ္တာတန်ခိုးတော်များ…. အဓိဌာန်များပြည့်ဝရန် ကျင့်ကြံအားထုတ်မှုများ၊ဘုရားဒကာ၊ဒယိကာမများနှင့်လည်းစည်းကားတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ၁၅ ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် အစ/ အဆုံး ◀️ ( ၁၅ )ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်း (၁၅၀၀၀) ဆု သိန်း ၁၅၀၀၀ စ ၄၄၁၇၉၈ ( ၁၅ )ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်း ( ၁၀၀၀၀) ဆု သိန်း ၁၀၀၀၀ ည ၅၅၈၀၀၄ ( ၁၅ )ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်း ( ၅၀၀၀) ဆု … Read more
၁၅ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ ကျပ်သိန်း (၁၀၀၀၀)ဆုရှင် ထွက်ပေါ်လာပါပြီ….
၁-၅-၂၀၂၀ ၁၅ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ ကျပ်သိန်း ၁၀၀၀၀ဆုကြီး ကို ပဲခူးတိုင်း ကဝမြို့နယ်မှ မနီလာထွန်းက …. ည ၅၅၈၀၀၄ အက္ခရာ နံပါတ်ဖြင့် အောင်ဆုထူးပိုင် လေးထောင့်ကန် -ပင်ရင်း ဆိုင်မှ ဆွတ်ခူးရယူသွားပါကြောင်း…. Ko Maung Tun ၁၅ ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် အစ/ အဆုံး ◀️ ( ၁၅ )ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်း (၁၅၀၀၀) ဆု သိန်း ၁၅၀၀၀ စ ၄၄၁၇၉၈ ( ၁၅ )ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်း ( ၁၀၀၀၀) ဆု သိန်း ၁၀၀၀၀ ည ၅၅၈၀၀၄ ( ၁၅ )ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်း ( ၅၀၀၀) … Read more
← Previous Page1 … Page261 Page262 Page263 … Page265 Next →